३७ दिनभित्र ४ पटक विवाह ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
३७ दिनभित्र ४ पटक विवाह !
ताइवानमा विवाह र सम्बन्ध बिच्छेदसँग जोडिएको एक घटना सार्वजनिक भएको छ, जसको बारेमा जानेर तपाई हैरान बन्नुहुनेछ । त्यहाँका एक बैंककर्मीले ३७ दिनभित्र एकै महिलासँग ४ पटक विवाह गरेका छन् भने तीन पटक सम्बन्ध बिच्छेद गरेका छन् । यो बारेमा मामिला कोर्टमा पुगेपछि मात्रै सबैले घटना थाहा पाएका थिए ।
यो मामिला ताईवानको एक बैंक कर्मचारीको हो । ताइवानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीका अनुसार यी पुरुष बैंक क्लर्कको रुपमा काम गर्दछन् । उनले विवाहको लागि विदा माग्दा ८ दिनको विदा पाए । उनीहरुको विवाह भयो र केही दिनमा विदा पनि सकियो । तर यी व्यक्तिले विदा बढाउनका लागि अनौठो तरिका निकाले । यसका लागि उनले श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरे र फेरि विवाह गरे ।
ताईवानमा विवाहका लागि कानूनअनुसार ८ दिनको विदा दिने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमअनुसार यी व्यक्तिले ३५ दिनमा श्रीमतीलाई तीन पटक सम्बन्ध बिच्छेद गरे र ४ पटक विवाह गरे । बैंकले उक्त मानिस के गरिरहेको छ ? भनेर जान्ने प्रयास गर्यो । त्यसपछि विदा नदिने निर्णय गरेको बैंकविरुद्ध युवकले केस दर्ता गरे । र, बैंकविरुद्ध विदाको नियम तोड्ने आरोप लगाए ।
कानूनमा भने यस कुराको व्याख्या गरिएको छ । बैंकलाई अदालतले छुट्टि नदिएकोमा ७०० डलरको जरिबाना गरेको छ ।